एचआईभीको सटिक उपचार पाउन अझै कति वर्ष कुर्नुपर्ने? – Health Post Nepal
एचआईभीको सटिक उपचार पाउन अझै कति वर्ष कुर्नुपर्ने?
२०७८ फागुन ९ गते १०:०६
काठमाडौं – विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले एचआईभीको उपचारमा ठूलो उपलब्धि हासिल गरे पनि यो घातक भाइरसविरुद्धको सही उपचारबाट पुरै विश्व अझै १० देखि २० वर्ष टाढा रहेको बताइएको छ। यो कुरा अरु कसैले नभई विश्वका चर्चित वैज्ञानिकहरुले बताएका छन्। हालसम्म तीनजनालाई यस घातक रोगबाट बचाइएको छ, जुन चिकित्सा क्षेत्रको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि पनि हो।
गत हप्ताअघि एक महिलालाई बचाइएको थियो, उनी पनि एचआईभीबाट पूर्णरुपमा निको भइसकेकी बताइएको छ। महिलालाई कोर्ड ब्लड ट्रान्सप्लान्ट दिइएको थियो किनकि उनलाई ल्युकेमिया भएको पनि पत्ता लागेको थियो। न्यूयोर्ककी ती महिलालाई यसकारण पनि बचाउन सफल भइयो किनकि उनको डोनर एक दुर्लभ आनुवंशिक उत्परिवर्तनबाट पीडित थिए जसले एचआईभी भाइरसको कोशिकाहरूमा हुने आक्रमणलाई रोक्ने गर्थ्यो।
के भन्छन् वैज्ञानिक?
इन्टरनेशनल एड्स सोसाइटीका अध्यक्ष शेरन लेभिनले यो कुरा आफूहरुका लागि अचम्मको भए पनि विश्वव्यापी रूपमा यसको उपचार पत्ता लगाउन अझै एक दशकभन्दा बढी समय लाग्न सक्ने बताए। ‘द टेलिग्राफ’मा प्रकाशित समाचारका अनुसार लेभिन भन्छन्, ‘हामी प्रयोगमा ल्याउन सकिने उपचारबाट अझै धेरै वर्ष टाढा छौं, विशेष गरी ठूलो मात्रामा प्रयोगमा ल्याउन सकिने उपचारबाट। र यसको उपचारमा मानिसको ठूलो धनराशी खर्च हुनसक्छ।’
लेभिन अगाडि भन्छन्, ‘यस केसबाट हामीलाई यो जानकारी प्राप्त भएको छ कि एचआइभी प्रतिरोधी कोशिकाहरूलाई प्रत्यारोपण गरेर उपचार सम्भव भएको हो। जुन यो सम्पूर्ण केसको मुख्य कुरा साबित भयो। यो यस केसको सबैभन्दा चाखलाग्दो पक्ष पनि थियो, जहाँ शरीरमा पहिलेदेखि नै रहेको रोगमा पनि कुनै हानि भएन।
यस भाइरसबाट विगतमा दुईजनालाई बचाइएको थियो। जसमध्ये एक केस सन् २००८ को हो। जहाँ टिमोथी रे ब्राउन, जसलाई ‘बर्लिन प्यासेन्ट’ को रुपमा पनि मानिन्छ उसलाई बचाइएको थियो। त्यसैगरी, दोस्रो बिरामीको नाम एडम कास्टिलेजो हो। जसलाई २०२० मा स्टेम सेल प्रत्यारोपणबाट नयाँ जीवन दिइएको थियो। यसलाई ‘लन्डन प्यासेन्ट’को रूपमा पनि चिनिन्छ। प्रतिवेदनका अनुसार प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणालीबाट दुई महिलालाई पनि बचाइएको थियो।
लेभिन भन्छन्, ‘प्रत्येक दशकमा हामीले एचआईभी अनुसन्धानमा धेरै अचम्मका कुराहरू हासिल गर्छौं। प्रत्येक १० वर्षमा हामीले केहि हासिल गर्छौं जुन धेरै उपयोगी साबित हुन्छ। तर, समस्या यो छ कि यो अर्को २ देखि ५ वर्षको लागि मात्र काम लाग्ने भइदिन्छ। त्यसैले भविष्यवाणी गर्न धेरै गाह्रो छ। यसबीच मानिसहरूलाई कसरी निको पार्न सकिन्छ भनेर छलफल चलिरहेका छन्। यद्यपि, हाम्रो लक्ष्य भनेको यो रोगलाई एक शटले जराबाटै हटाउनु हो, जसमा धेरै समय लाग्न सक्छ।’